Apartment 2 + kk nge yokungena eyakhe - I-Airbnb
Apartment 2 + kk nge yokungena eyakhe
I-Apartment 2 + kk ngombono wegadi kunye namahlathi kwindawo ezolileyo yaseLudvíkov. Kwiindwendwe zethu sinikezela ngeendawo zokupaka ezikhuselekileyo phambi kwegaraji endlwini.
Iindwendwe zingasebenzisa i-pergola yethu nge-barbecue, abantwana nabo banekona yabantwana babo kunye ne-trampoline. Abazali kufuneka babeke esweni ukhuseleko lwabantwana babo. Ukukwazi ukuqesha iibhayisikili, ii-e-bikes, ii-quad bikes, ii-scooters kwi-park yekharavani yendawo ngentlawulo encinci. Ukhenketho lunokucwangciswa ngaphandle kokusetyenziswa kwemoto, okanye kukho isithuthi sikawonke-wonke esikufutshane esiya kukusa eKarl. Wells
Indawo yethu yokuhlala yabucala, eye yahlaziywa ngaphakathi kwaye yonke into ilungelelaniswe neendwendwe zethu ukuze zibe nentuthuzelo enkulu. Inzuzo kukuba unomnyango wakho kwaye izitshixo zinokufumaneka kwigumbi lokugcina.
Abantu baya ezintabeni ukuze bafumane umoya omtsha, ukuba kunokwenzeka ukukha amakhowa okanye ukuhamba nje emahlathini acocekileyo ukuya kukha amaqunube, amaqunube, amaqunube, amanzi amaminerali eKarlova Studánka, eyona nto ibalaseleyo kwimpilo yethu. Kwiinyanga zasebusika, kukho izinyusi zokutyibiliza ekhephini ezikufutshane kumgama oziikhilomitha ezi-2
Abanini bazimisele ukucebisa ngezinto ezinomtsalane kwindawo ekufutshane.
Iilwimi: Čeština, English, Polski
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$130